Turkiga & Jarmalka oo dib u hagaajinaya xiriirka dalalkooda – Kasmo Newspaper
Turkiga & Jarmalka oo dib u hagaajinaya xiriirka dalalkooda
Updated - January 7, 2018 1:46 pm GMT
London (Kasmo), Wasiirrada Arrimaha Dibadda 2da dal ayaa guddoonsaday wada shaqayn si dib loogu hagaajiyo xiriirkooda ka dib markii muddo xiisado ka dhex aloosnaayeen 2da dhan.
Sigmar Gabriel, Wasiirka Arrimaha Dibadda Jarmalka, ayaa Sabtidii 6dii Jenaayo 2018 ku marti galiyay, magaalada bartamaha Jarmalka ee Goslar, dhiggiisa Turkiya Mevlut Cavusoglu. Intii kulanku socday 2da mas’uul waxay caddeeyeen in ay ku dadaali doonaan sidii xiriirka 2da dal loogu soo dabaali lahaa mid saaxiibnimo.
Mas’uuliintu waxay isla soo qaadeen qodobbo ay ka mid ahaayeen heshiiskii 2015 ee dhexmaray Turkiya iyo Midowga Yurub kuna saabsanaa dhimista qulqulka qaxootiga soo galaya Yurub. Iyo waliba siideynta warfidiyeenka dhalashada Jarmalka haysta kana soo jeeda Turkiya, Deniz Yucel, kaas ugu xirnaa gudaha Turkiya arrimo la xiriira argagixisonimo.
Sanaddadii dambe xiriirka Turkiya iyo Jarmalka ayaa ahaa mid sii xumaanaya, gaar ahaan intii ka dambaysay afgambigii dhicisoobay 15kii July 2016kii.
Xiisadda ayaa sii kacday markii mas’uuliinta Turkiya xabsiga dhigeen hawlwadeenno iyo warfidiyeenno Jarmal ah oo lagu eedeeyay in ay lug ku lahaayeen arrimo argagixiso.
Jarmalka ayaa dhankiisa diiday in uu Turkiya u dhiibo 2 qofood oo magangalyo-doon ahaa, kuwaas oo Ankara u haysatay in ay ku lug lahaayeen afgambigii dhicisoobay.
Jarmalka wuxuu Turkiya u leeyahay ahmiyad gaar ah, isaga oo ah dalka la wadaaga ganacsiga ugu ballaaran iyo in ay ku noolyihiin 3 malyuun oo muwadiniin Turki ah.
Maalintii Jimcaha, 5tii Jenaayo 2018, Madaxweynaha Turkiya, Recep Tyyib Erdogan ayaa ku tagay Paris, safar qayb ka ah hagaajinta xiriirka Turkigu la leyahay dalalka Yurub, isaga oo la kulmay dhiggiisa Faransiiska, Emmanuel Macron.